जहाँ छात्रवृत्ति पाउनकै लागी छात्राहरुले कुमारित्व परीक्षण गराउनुपर्छ - Naya Pusta
जहाँ छात्रवृत्ति पाउनकै लागी छात्राहरुले कुमारित्व परीक्षण गराउनुपर्छ
काठमाडौं, १४ माघ । गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने चलन प्राय सबैतिर हुन्छ र प्रायः विश्वभरमै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणको मापदण्ड यहीँ हो। तर दुनियमा एउटा यस्तो देश पनि छ जहाँ छात्राहरुले विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउनका लागि केवल गरिब र जेहेन्दार भएर मात्र पुग्दैन कुमारी अर्थात् भर्जिन पनि हुनुपर्छ।
दक्षिण अफ्रिकाको उथुकेला सहरमा विद्यार्थी किशोरी तथा युवतीहरुलाई छात्रवृत्ति पाउनका लागि आफ्नो कुमारित्व परीक्षण गराउन पर्दछ। छात्रा चाहे जुनसुकै उमेरका होउन् भर्जिनिटी टेष्ट गराउनैपर्छ। कुमारित्व परीक्षणका क्रममा कौमार्य भंग भएको अर्थात् यौन सम्पर्क राखेको प्रमाणित भएका छात्राहरु छात्रवृत्ति पाउने सूचिबाट बाहिरिन्छन्।
आखिर छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्दा किन भर्जिनिटी परीक्षण गराइन्छ त ? उथुकेला सहरका मेयरले स्कुल तथा कलेजमा पढ्ने त्यस्ता छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका छन् जो भर्जिन रहेका छन्। छात्रवृत्ति पाइसकेपछि रकम भुक्तान हुने सिलसिलामा गरिने पुनः परीक्षणका क्रममा कुमारित्व गुमाएको पाइएमा समेर्त छात्रवृत्ति रकम फिर्ता लिइन्छ।
वास्तवमा छात्राहरुमा एचआइभी एड्सको संक्रमणको जोखिम कम गर्न कम उमेरमा असुरक्षित यौन सम्पर्कलाई निरुत्साहित गर्नका लागि नगर प्रशासनले यस्तो छात्रवृत्ति नीति ल्याएको हो। तर कतिपयले भने छात्रवृत्तिका लागि छात्राहरुको कुमारित्व परीक्षण गर्ने कार्यले व्यक्तिको गोपनियता हनन गर्ने तथा किशोरीहरुलाई निरास तथा लज्जित बनाउने भन्दै विरोध गरेका छन्।
साझा ब्वाईफ्रेन्डसँग बिहे गर्ने तयारीमा जुम्ल्याहा दिदीबहिनी
तीन तस्वीरमा युवतीको नाङ्गो शरीरमाथि खानाको परिकार, सेक्स समेत गर्न पाईने !
युुवकले काटे पोर्न फिल्म हेर्दाहेर्दै आफ्नै यौनांग !